လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာကြောင့် ကွန်ပြူတာအခြေခံနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ ရှိဖို့လိုတာလဲ ? | Xen Digital Solution
Xen Digital Solution
Home Blog လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာကြောင့် ကွန်ပြူတာအခြေခံနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ ရှိဖို့လိုတာလဲ ?
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာကြောင့် ကွန်ပြူတာအခြေခံနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ ရှိဖို့လိုတာလဲ ?
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အရင်ကထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားလာသလို စိန်ခေါ်မှူတွေလည်း ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့ နေရာကို လိုချင်ရင်တော့ ထိုက်တန်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ ကွန်ပြူတာအခြေခံနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံလောက်တောင် မပိုင်နိုင်ထားဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေကတော့ နည်းပါးနေအုံးမှာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းဟာ အရည်အချင်းရှိသူ/ပြည့်ဝသူ/ကြိုးစားသူတွေကို အမြဲလိုအပ်နေလို့ပါဘဲ။ အကယ်၍ သင်သာ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိသူ၊တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိသူဆိုရင်တော့ကွန်ပြူတာအခြေခံနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်တန်းတွေကို လေ့လာသင်ကြားထားသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဒီထက်ပိုပြီးမြှင့်တင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ Xen IT Training Centre & Digital Solution မှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်တန်းကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘက်ကသာ သင်တန်းချိန်မှန်ဖို့နဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို လက်တွေ့လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ Xen IT Training Centre ဘက်ကနေ သင့်ကို ဒီထက်ပိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။ 😎😎😎
သင်တန်းတည်နေရာ။ အမှတ်( 39/A) ပထမအလွှာ (မြင့်မိုရ်ခိုင်စတိုး)၊ တောင်ဝိုင်းလမ်း (ကုန်းထိပ်)၊ မော်လမြိုင်မြို့။ တောင်ဝိုင်းကုန်းထိပ်မှာရှိတဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းရှေ့တည့်တည့်က ၄ ထပ်တိုက်ဆို လူတိုင်းသိပါတယ်။
အမှတ် ( 39/A) ပထမအလွှာ၊ တောင်ဝိုင်းလမ်း၊မော်လမြိုင်မြို့။
© Copyright 2019 Xen Digital Solution| All rights reserved